သူနှင့် ရထားခရီးစဉ် … လက်မှတ်များ ကုန်ပါပြီ | ဥက္ကာကိုကို
သူနှင့် ရထားခရီးစဉ် … လက်မှတ်များ ကုန်ပါပြီ	Posted by oakkarkoko on October 25, 2013
ည …. ၁၀ နာရီခန့်။
အမြန်ရထားတစ်စင်းက တရှူးရှူးတရှဲရှဲအော်ဟစ်ကာ ဘူတာရှေ့မှ ဒေါသတကြီးပြေးလွှားသွား၏။ ရပ်လိုရပ်ငြားမျှော်လင့်ချက်ကလေးဖြင့် သူလက်ပြတားမိသေးသည်။ ရထားကတော့ သူ့လို
အညတရ တေလေအန္ဓတစ်ကောင်ကို ဂရုမထားပါ။ မိုးတွေက ခပ်ဖွဲဖွဲကျလာသည်။
ဘူတာလေးရှိ လက်မှတ်ရောင်းအဖိုးကြီးက ဆေးပေါ့လိပ်ခဲကာ သူ့နံဘေးသို့ ရောက်လာ၏။
“ဘယ်ကိုလဲ ? အင်း… ကျနော် အမေ့အိမ်ကို ပြန်ချင်လို့ပါ… အဟင်း… မဟုတ်စေးဘူး… ခရီးဝေးတစ်ခုထွက်ချင်လို့ပါ…´´
အဖိုးကြီးက ခေါင်းကို အပေါ်တင်လိုက် အောက်ချလိုက် လုပ်သည်။ တကယ်တော့ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်တာဖြစ်သည်။ ပုတ်သင်ညိုနှင့်လည်း နည်းနည်းတူသည်။
“ဒီဘူတာက ကြားဘူတာကွ။ မြို့ပတ်ရထားတွေပဲရပ်ကြတာ။ အမြန်ရထားကိုတားလို့ ဘယ်ရမလဲ။ မင်းစီးချင်ရင် ခဏနေ မြို့ပတ်ရထားလာလိမ့်မယ်´´
သူ… ခေါင်းကို အသာယမ်းမိသည်။
“ကျနော်က ဟိုး… အဝေးကြီးကို သွားချင်တာပါ။ ဒီမြို့ကြီးကိုပဲ စက်ဝိုင်းလို လှည့်ပတ်သွားနေချင်တာမဟုတ်ဘူး´´
သူ… ခေါင်းကို ငုံ့ထားရင်း…….
“တကယ်တော့ … ဒီမြို့ပျက်ကြီးကို ကျနော်စိတ်ကုန်နေတာ… ကြာပါပြီ´´
အဖိုးကြီးက သူ့ကို စူးစမ်းသလိုမေးလာသည်။
သူ… စိတ်မပါသလို ပြန်ဖြေလိုက်၏။
“… သြ… ´´
အဖိုးကြီးက ဘူတာအတွင်းရှိ ခုံတန်းမှာ ၀င်ထိုင်ရင်း ဆေးပေါ့လိပ်ကို မီးညှိသည်။
“အေး… ကဗျာဆရာရဲ့… တကယ်တော့ လူ့ဘ၀ဆိုတာကလည်း ရထားတစ်စင်းပဲကွယ့်´´
“မင်းတို့ငါတို့ဟာ ဟောဒီလောကကြီးမှာ ဘူတာချိန်မမှန်တဲ့ ရထားတွေအဖြစ် အသက်ရှင်နေကြတာ´´
ဥသြသံခပ်လေးလေးနှင့်အတူ မြို့ကိုပတ်သော ရထားတစ်စင်း ဘူတာလေးသို့ ဆိုက်ရောက်လာသည်။ အတက်အဆင်း ခရီးသည်များကိုကြည့်ပြီး သူ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချမိသည်။ တစ်စုံတစ်ရာကို နာနာကျင်ကျင် လွမ်းလှပါပြီ။
ဘူတာအတွင်း လူသူလေးပါးကင်းရှင်းသွားပြီး သူတို့နှစ်ဦးသာ ကျန်ရစ်သည့်အချိန်မှာ အဖိုးကြီးက စကားဆက်သည်။
“မင်းက… ကဗျာဆရာဆိုတော့ ကဗျာတွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ ရထားပေါ့… ဒါပေမယ့် မင်းရထားက အချိန်လည်းမမှန်ဘူး။ ဘယ်ဘူတာဆိုက်ရမှန်းလည်းမသိဘူး….
သူ အက်ကွဲသွေ့ခြောက်စွာ ရယ်မောပစ်လိုက်သည်။ မိုးဖွဲတွေက စဲစပြုလာသည်။
“အေး…. ငါလည်း ငါ့ကိုယ်ငါ ရထားတစ်စင်းပဲလို့ ခံယူထားတယ်။ လက်မှတ်တွေ၊ စာရင်းဇယားတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ရထားအိုကြီးပေါ့ကွာ… ဟက် ဟက်´´
“ဘော်….. ဘော်…. ´´
အမြန်ရထားတစ်စင်းက ဥသြသံအဆက်မပြတ်ပေးကာ မြို့တွင်းဖက်သို့ အလောတကြီး ၀င်ပြေးသွား၏။
“တို့တတွေဟာ… ရှင်သန်နေသရွှေ့ကာလပတ်လုံး ရထားတစ်စင်းလို ခုတ်မောင်းနေကြရတယ်… သံသရာပြေးလမ်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ရထားကိုယ်မောင်းနှင်ရင်း
တစ်ဘူတာဝင်၊ တစ်ဘူတာထွက် တစ်ရက်မပျက် လှုပ်ရှားနေကြရတယ်။ ရထားပေါ်မှာပါလာတဲ့အရာတွေကို အစီအစဉ်တကျ ပို့ဆောင်ရတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်း ကိုယ့်တွဲတွေပေါ် ဆန့်နိုင်သမျှ သယ်လာရဲရမယ်…..
…. ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ စက်ခေါင်းမှူးလို့ ခံယူတတ်ရင် ဘ၀ ဆိုတာ ပျော်စရာခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုပါကွာ´´
ရှည်လျားသောစကားအဆုံးမှာ အဖိုးကြီးက ကုန်သွားသည့် ဆေးပေါ့လိပ်တိုကို ခပ်ဝေးဝေးရောက်အောင် တောက်ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး လည်ချောင်းခေါင်းတိုင်မှ မီးခိုးငွေ့များကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ကာ`အဟွတ် အဟွတ်´ ခနဲ ဥသြဆွဲ၍ စာရင်းအင်းများ၊ လက်မှတ်များကို တင်ဆောင်ရန် သူ့ဘူတာရုံလေးထဲသို့ နှေးဖင့်လေးကန်စွာ ၀င်ရောက်သွားတော့သည်။
သူ .. တစ်ဦးတည်းသာ တိတ်ဆိတ်သော ညည့်ဦးယံမှာ ဥသြမဆွဲ…. ရပ်တန့်နေဆဲ……….။
← ညတစ်ညကို ဖြတ်သန်းခြင်း	ပုံပြင်လေး(၅) →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...